Nhọrọ, ịzụta akụrụngwa | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Rubric: Nhọrọ, ịzụta ngwá ọrụ
Kedu ihe dị iche n'etiti oghere SLR zuru ezu na ntinye nbanye SLR? +
Kedu ihe dị iche n'etiti SLR zuru ezu na SLR-ọkwa larịị? + enwere kamera nwere ihe osise iri isii na ise maka mmadụ iri anọ na ise, ma ọ bụrụ na inwere ike iwere Google isiokwu "Ezi-uche gbasara foto" nke M. Afanasenkov kwuru. Ihe niile dị ebe a ...
Kedu ihe bụ mgbanwe
Kedu ihe ngbanwe ahụ dịka ihe dịka nhazi ahụ bụ naanị ezi ezi http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=110 na ị gaghị eme mgbanwe ma ọ bụrụ na oghere ahụ adabaghị na àgwà ahụ weghachite ya. (site na ya. justiere reconcile), lelee na ...
Enwere batrị Aị na lithium ion AA nke nwere voltaum 1.2-1.5V?
Enwere batrị lithium Li-ion AA nwere batrị ọkụ nke 1.2-1.5V? Ee e, ọ nweghị - batrị Li-Ion nwere volta 3,7V ma ọ bụ obere. Eziokwu, anụrụ m banyere ...
Ego ole ka ụda Zenit-E na igwefoto?
Ego ole ka ụda Zenit-E na igwefoto? Ma njikọ na igwefoto. Ezigbo akụkọ site na 1 April, ụdị a na - atụ aro ... .SAM M na - eji aka CANON EOS 350. Ugbu a ị nwere ike ịzụta e ...
Kedu ihe 1 / 2.3 Matrix pụtara na igwefoto na ihe ọ na-emetụta? Kedu ihe matrik dị mma?
Kedu ihe 1 / 2.3 Matrix pụtara na igwefoto na ihe ọ na-emetụta? Kedu ihe matrik dị mma? Ememe Obi Ụtọ! 1 / 2.3 abụghị obere matriks ị dere? Ọ ...
Kedu batrị AA kacha mma?
Kedu batrị AA kacha mma? Varta, Sanyo, Energizer, Duracell ma ọ bụrụ na ị ghaghị ijide ụgwọ a ruo ogologo oge, mgbe ahụ ịkwesịrị iji ụda ma ọ bụ 2-2300% wepụ ya na afọ ahụ.
Nyere aka na ịhọrọ igwefoto maka ma megide canon powerhot sx410 bụ maka Fans nke DSLR, biko echegbula:
Enyemaka na ịhọrọ igwefoto maka ma megidekwa Canon powerhot sx410 bụ Biko Ewepula ndị hụrụ DSLRs: Ihe mbụ ị ga - eme bụ foto dị elu ma ọ bụ foto nwere nnukwu ọ ...ụ ...
Kedu ihe oghere dị elu-n'akuku pụtara na olee otu o si dị iche na nke a?
Kedu ihe oghere dị elu-n'akuku pụtara na olee otu o si dị iche na nke a? Ihe anya anya na-elezi anya nwere nkewa site na ilele anya. elu anya anya. Echiche elele anya anya dị otú ahụ karịrị ihe nrịgo 60 (nyochaa ogologo ruo ...
AA LR6 na batrị HR6. Kedu ihe dị iche?
AA LR6 na batrị HR6. Kedu ihe dị iche? HR6 bụ batrị na-agbanye ọkụ. LR6 bụ batrị alkaline, batrị na-enweghị ike ịnweta. N'ihi ya, nke mbụ voltage arụ ọrụ nke mbụ 1,2 volts na nke abụọ 1,5 volts. Maka ...
Kedu otu esi elele ihe mgbochi nke Canon 600D ??
Kedu otu esi elele ihe mgbochi nke Canon 600D ?? rakso The Thinker (8765) nyere azịza ụgha. Ihe niile mere dịka ntụziaka ya na ebe a bụ nsonaazụ nke free program EOSinfo. M gbalịrị site na ụlọ ọrụ rakso, site na IExplorer, ...
Enweghị ụda mgbe vidiyo na iPhone 5S
Ọ dịghị ụda na vidiyo na iPhone 5S Nnọọ, nnọọ mwute! Lee, ma eleghị anya ị ghaghị ịgbachi nkịtị na ihe niile ị chọrọ ime bụ wepu plọg n'azụ ekwentị ahụ ma dozie ihe niile. ...
Enwere USB ọ bụla>> Nkwụnye ọkụ FireWire?
Enwere ihe nkwụnye ọkụ USB-> FireWire? Teknụzụ anaghị achọpụta. Echere m na ọkwa nke kọntaktị soldering, ee, Schaub ziri ezi nwere 1394 yana na USB - IHMO tael enwere kpamkpam 🙂 site na voltaji na protocol ...
Kedu ihe oghere whale? Ntak emi ẹkotde whale ndien nso ke ntak emi mîdụhe ke ntak ndimek 450 dos? Daalụ!
Gịnị bụ oghere lebe? Kedu ihe kpatara eji akpọ ya whale ma kedu anya dị mma ịhọrọ maka mọto 450 7605 ahụ? Daalụ! http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/XNUMX Kit - set (Bekee). Kit bụ igwefoto + ...
U1 na U3 Ọ bụ ihe dị iche na usoro kaadị flash maka 4K Panasonoc G7 video dị mkpa?
U1 na U3 Ọ bụ ihe dị iche na usoro kaadị flash maka 4K Panasonoc G7 video dị mkpa? Kedu ihe ị ga-eche? Were nke kachasị mma, chekwaa abaghị uru. N'ikwekọ na ọkọlọtọ, òtù UHS na-ahọrọ * ọsọ ọsọ kacha nta ...
Achọrọ m ịzụta igwefoto. Ọ dị mma, ma ọ bụghị ego. ya mere ikwu okwu, buru nzọụkwụ mbụ gaa foto foto.
Achọrọ m ịzụta igwefoto. Nice ma enweghi ọnụ. dị ka a ga-esi kwuo, mee nzọụkwụ mbụ gaa na foto ndị ọkachamara. Ọ bụrụ na nke a bụ igwefoto dijitalụ mbụ gị ma ịbanyeghị iji nweta ego na foto - zụta ihe ọ bụla ...
Otu esi ehichapu nhicha na Epson stylus foto printer RX610.
Otu esi ehichapu nhicha na Epson stylus foto printer RX610. Wepu cartridges ahụ, lee n'ime isi ihe. Were sringes ndị nwere ike iwepụ (na-enweghị nkedo), belata ihe ndị ahụ site n'aka onye na-eri nri, lee 5. Na-ekpuchi hoses na sirinji, ...
Kedu ihe oghere USM? Kedu ihe oghere STM? Kedu ka otu oghere USM si dị iche site na STM? Canon which one is better ...
Gịnị bụ oghere USM? Gịnị bụ oghere STM? Kedu ka oghere USM si dị iche na STM? Canon kedu nke ka mma ... A na-amata oghere nke ultrasonic site na mkpirisi okwu USM na aha. Usoro mbanye Ultrasonic ...
Kedu otu esi ekpebi ma ọ bụrụ na ebubo ego maka selfies ma ọ bụ na ọ bụghị?
Kedu otu esi ekpebi ma ọ bụrụ na ebubo ego maka selfies ma ọ bụ na ọ bụghị? M na-agbanye ọkụ, ọkụ ahụ na-acha ọkụ uhie, na mgbe elekere iri gasịrị, ọkụ na-apụ ma monopod adịghị akwụ ụgwọ. Ihe ị ga-eme Dika ntuziaka, oge kachasi ...
Kedu igwefoto ka mma iji lee video?
Kedu igwefoto dị mma ịse maka vidiyo? gbakwunye 15-20 000 ma zụta Sony NEX VG20E Nke a ga-atọpụ aka gị mgbe agbapụ ... na eserese ahụ agaghị adị njọ ... N'ihi ...
kedu ka ìhè nke ala Lux si dị?
Kedụ ka etu mgbari ọkụ si dị iche iche? Na igwefoto igwe onyoonyo, parammu a na egosiputa na dika udiri oku a, igwefoto ga enweta vidiyo nke nwere olu di elu. Kedu ọkwa a - ụlọ ọrụ ọ bụla maka igwefoto dị iche iche…
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,389.